Nsɛm a Nkurɔfo Ka Tia Yehowa Adansefo No, Adɛn Nti Na Ebi Wɔ Hɔ a Wonyi Ano?
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Armenian (West) Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Basque Bassa (Cameroon) Batak (Toba) Bislama Bosnian Boulou Brazilian Sign Language Bulgarian Catalan Cebuano Chavacano Chichewa Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chol Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Ewe Faroese Finnish Fon French Ga Galician Georgian German Greek Guarani Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Iban Icelandic Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kachin Karen (S'gaw) Kazakh Kazakh (Arabic) Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwanyama Lingala Lithuanian Low German Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mauritian Creole Mingrelian Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele (Zimbabwe) Norwegian Nzema Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Cuzco) Rarotongan Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (South Africa) Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Spanish Sign Language Sunda Swahili Swedish Sãotomense Tagalog Tahitian Tamil Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tojolabal Tongan Tswana Turkish Twi Uighur (Cyrillic) Ukrainian Urdu Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venda Vezo Vietnamese Wallisian Xhosa Yoruba Zulu
Asɛm yi mu no, Yehowa Adansefo de Bible afotu yɛ adwuma. Enti ɛnyɛ asɛm biara a nkurɔfo bɛka atia yɛn na yeyi ano. Sɛ nhwɛso no, Bible mu abebusɛm bi ka sɛ: “Nea ɔteɛ ɔfɛwdifo so no nya animguase.” (Mmebusɛm 9:​7, 8; 26:4) Sɛ nkurɔfo ka yɛn ho nsɛm a ɛnyɛ nokware a, yɛmma ɛnhaw yɛn dodo. Enti yenni nea afoforo ka akyi ne wɔn nko ntɔkwaw, mmom yɛn botae ne sɛ yɛbɛsɔ Onyankopɔn ani.​—Dwom 119:69.
Ɛyɛ ampa sɛ “kommyɛ wɔ ne bere, na ɔkasa nso wɔ ne bere.” (Ɔsɛnkafo 3:7) Enti wɔn a wɔwɔ koma pa a wɔpɛ sɛ wohu nokware no, yɛbɔ mmɔden boa wɔn. Nanso, yɛkwati akyinnyegye a aba biara nnim. Yɛnam saa a yɛyɛ so di nea Yesu ne tete Kristofo no kyerɛkyerɛe so, na yesuasua wɔn nhwɛso.
Yesu yɛɛ dinn bere a nkurɔfo bɔɔ no sobo wɔ Pilato anim no. (Mateo 27:11-​14; 1 Petro 2:​21-​23) Saa ara nso na bere a nkurɔfo kaa sɛ Yesu yɛ odidifo ne ɔsanomfo no, wamma wɔn mmuae biara. Mmom, ɔde ne nneyɛe kyerɛe sɛ sobo a na wɔrebɔ no no nyɛ nokware. Nea Yesu yɛe no ne Bible mu asɛm yi hyia: “Nyansa nam ne nnwuma so di bem.” (Mateo 11:19) Nanso ɛtɔ da a, na ehia sɛ Yesu ka biribi kyerɛ wɔn a na wɔrekasa tia no no. Tebea a ɛtete saa mu no, Yesu de akokoduru yɛɛ saa.​—Mateo 15:​1-3; Marko 3:​22-​30.
Yesu kyerɛɛ n’asuafo sɛ, sɛ afoforo kasa tia wɔn a, ɛnsɛ sɛ wɔma wɔn abam bu. Ɔkae sɛ: “Anigye ne mo sɛ me nti nkurɔfo bɔ mo ahohora na wɔtaa mo na wodi atoro ka asɛmmɔne biara to mo so.” (Mateo 5:​11, 12) Wei mu mpo, Yesu san kaa sɛ, sɛ kasatia a ɛtete saa bue hokwan a n’asuafo no betumi de adi adanse a, obedi ɛbɔ a ɔhyɛe yi so: “Mɛma mo ano ne nyansa a wɔn a wɔsɔre tia mo nyinaa ntumi nnyina ano anaa wɔmmɔ ngu.”​—Luka 21:12-​15.
Ɔsomafo Paulo tuu Kristofo fo sɛ, ɛnsɛ sɛ wɔne wɔn a wɔsɔre tia wɔn no gye akyinnye hunu biara. Ɔkaa sɛ akyinnyegye a ɛte saa no, “mfaso biara nni so, na ɛyɛ adehunu.”​—Tito 3:9; Romafo 16:17, 18.
Ɔsomafo Petro hyɛɛ Kristofo nkuran sɛ, bere biara a ɛbɛyɛ yiye no, wɔmfa anoyi mma obiara a obebisa wɔn gyidi ho asɛm no. (1 Petro 3:15) Nanso ɔkaa sɛ mpɛn pii no, eye pa ara sɛ wɔde wɔn nneyɛe bɛda wɔn gyidi adi, sen sɛ wɔde wɔn kasa bɛyɛ saa. Ɔkyerɛwee sɛ: ‘Momfa papayɛ nyɛ nnareka nsiw nsɛnhunu a nnipa a wonni adwene keka no ano.’​—1 Petro 2:​12-​15.
Share Share Nsɛm a Nkurɔfo Ka Tia Yehowa Adansefo No, Adɛn Nti Na Ebi Wɔ Hɔ a Wonyi Ano?